Mhinduro - gomymobi.com
Zvipo Simba Kugadzirisa
Ita bhizinesi rako kubudirira & kubhururuka kumusoro !!!
gomymobi.com yakagadzirirwa kukubatsira iwe kuvaka ako mabhizinesi masaiti nekukurumidza, nyore & zvinobudirira. Zvese zvakakosha zvishandiso zvekuburitsa rako bhizinesi & zvigadzirwa zvekugadzira kune nyika.
Tsvaga zvimwe pazasi pezvinhu zvine simba zvaunogona kushandisa kugadzira nekugadzirisa zviripo pamhepo.
kana Tanga Zvino
Ngatipei zita renyu rezita & zvigadzirwa zvekugadzira zvakanaka kune wese munhu wepanyika neako eCommerce chitoro anovaka. Isu tinokubatsira iwe kugadzira Unlimited zvitoro, kutengesa zvisingagumi zvigadzirwa; pasina mubhadharo wekutengesa, hapana mari yekuhaya; iwe unowana 100% mubhadharo wezvaunotengesa.
Vhura Chitoro & Tengesa
Vatengi Vedu Vanotyisa Vanoda Iwo Anoshamisa Mhinduro
Chinangwa chedu chekutanga chiri kutarisa kuita kuti vatengi vedu vafare. Ehe, iyi ndiyo nzira yatinoshandira bhizinesi rako, futi.
Pamberi neBusiness Solutions
Tsika Kodhi Mhariri
Kunyorera & Virtual Zvigadzirwa
Kutanga kuvaka yako webhusaiti mawebhusaiti kubva pakutanga kana kusarudza kubva kune akawanda dhizaini-akagadzirwa matemplate. Neye yepasirese inyowani yekuzvuva uye yekudonha webhusaiti muvaki, unogona kugadzira nekuvandudza chero webhusaiti iwe yaunoda kana yaunoda.
Edza Element Builder YEMAHARA
Batanidza hupfumi bhizinesi zvigadzirwa kune chero saiti. Zvese eCommerce, kutenderera, uye mitezo yemitezo inochengetwa zvizere uye inouya neyakavakirwa-mukati inoteerera maitiro.
Gadzira epamberi ewebhu kunyorera uchishandisa tsika kodhi mhariri kuti uwedzere kana kugadzirisa chero chaunoda. Chengetedza zvese zvinorema zvemukati kumashure kwezviitiko uye zviratidze zvakanakisa mukupindura kudzokorora marongero.
Tengesa kunyoreswa nechero izwi, nhengo uye mapakeji emasevhisi, chaiwo zvinhu, zvemukati, nharaunda uye software. Govera zvinodzokororwa kana kamwechete kubhadhara nemhando dzakawanda dzenguva dzekuyedza uchishandisa akasiyana siyana evanopa mubhadharo ekubhadhara.
YEMAHARA kune rako bhizinesi webhusaiti
gomymobi.com inofara kukubatsira iwe kugadzira yako yekutanga bhizinesi saiti, uye kuitisa iyo MAHARA muhupenyu hwese.
Kunyoresa kuri nyore uye nekukurumidza, hapana kiredhiti kadhi inodikanwa; uye yako yemahara account & bhizinesi webhusaiti gara nesu nekusingaperi.
Vhura zvitoro ZVisingabvumirwe
Kana iwe uchida kuvhura isingagumi online zvitoro kutengesa akawanda akasiyana zvigadzirwa, iwe unogona kuita zvese zviri nyore.
Tengesa zvigadzirwa zvakasiyana
Nedu eCommerce chikuva, unokwanisa kutengesa zvese zvigadzirwa zvemadhijitari uye zvepanyama, uye kunyangwe kunyorera kuchitoro chimwe chete nyore.
Tsika Domain Name
Kana wagara uine nzvimbo uye vanoda kurishandisa akasika Website, chete vanofanira kupa nzvimbo iyi ipapo kumhanya kwako Website bhizimisi iri tsika soumambo. Yako bhizinesi saiti rinotaridzika kunge hunyanzvi neyakajairika domain.
Isa kuburikidza neFTP
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita wega Kana iwe unogona kurodha pasi rese saiti munharaunda.
Yakasarudzika subdomain yeyese saiti
Kukwanisa kushambadza nekuchengetedza yako bhizinesi saiti ne1 tinya chete.
Inodhura & inonyoresa kunyorera
Paunenge iwe wagutsikana nemhinduro dzedu, isu tinopa akawanda anonzwisisika ekunyorera kukwidziridza account yako kuti uwane mamwe masimba maficha.
Gamuchira nekutengesa rezenisi reruzivo
Iwe unokwanisa kuwana mari nesu, nekutengesa ako marezinesi theme kune vamwe vashandisi. Iwe unogashira mari yese, isu hatibhadharise mari.
Webhusaiti theme Musika Pamusika
gomymobi.com ino zvakare inzvimbo yevashandisi vese kutengesa madingindira avo avanoda, ivo vagadziri vanogona kupa dingindira remahara kana kutengesa kwemarezinesi maviri: pane chisikwa kana hupenyu hwese.
Zviripachena, ivo vagadziri vanogona kuisa yavo yekushambadzira kodhi (kana chikuva) mumatimu avo kana vangangoda kuvapa mahara.
MAUNITESI asingagumi & mapeji
Iwe unogona kugadzira mawebhusaiti asina muganho uye webhusaiti yega yega zvakare gadzira risingagumi mapeji ewebhu.
Yakavakwa-mu traffic tracker
Isu tine yakavakirwa-mukati traffic tracker iyo inokubatsira iwe kuverenga kushanya & kutarisa peji, idzi nhamba dzinogona kuteverwa zuva nezuva.
Zvirokwazvo, iwe unogona kuisa yako imwe tracker chikuva, senge Google Analytics zviri nyore uye nekukurumidza.
Nzvimbo dzinoteerera zvizere uye madingindira
Zvese zvinyorwa nemasaiti zvinoteerera zvizere uye zvine hushamwari zvine hushamwari, zvakagadzirirwa kuti zvishande pane chero resolution yeyakapi yemabhurawuza emazuva ano.
Uye zvakanyanya kukosha, Dhijitari Panel & Mushandisi Mushandirapamwe zvakare anoteerera zvizere, vashandisi vanogona kubata & kugadzira masayiti nguva dzese kwese kwese.
Sisitimu yedu yakagadzirirwa kupa mawebhusaiti ako uye inochengeta akanakisa kumhanya & kuita.
Sarudza kubva pamusoro pe 95 dhizaini-yakagadzirwa saiti madhishu ebhizinesi rega rega iwe raungade kumisikidza.
Yakazara Dhizaina Rusununguko
Dhizaina uye gadzira yako saiti nenzira chaiyo yaunoda neyedu yekudhonza uye kudonhedza.
Simbisa Media Bhurawuza
Ratidza yako mifananidzo, mavhidhiyo kana chero multimedia zvinhu mune inoyevedza gallery dhizaini neyedu ine simba Media Bhurawuza.
Ipa uye utengese ako edhijitari kana epanyama zvinhu uye masevhisi kana bhizinesi mune yakanaka online chitoro.
Chitoro & Chigadzirwa Maneja
Tevedza ese maodha uye chengetedza yako hesera kubva kune chero decives: desktop, laptop, piritsi kana nhare.
Maitiro Ekubhadhara Akawanda
Ipa yakavimbika yekubhadhara mhinduro inoita kuti online kutengeserana kuve nyore uye kwakachengeteka iwe nevatengi vako. Gamuchira makadhi echikwereti, PayPal, Stripe, Authorize.net, kubhadhara kwepasina internet uye nezvimwe - komisheni yemahara zvachose.
Coupons uye Discounts
Simbisa kutengesa kwepamberi nekupa madhesiki emwaka uye kutumira kwemahara pane maodha ezviitiko zvakakosha.
Titendere isu kusimudzira bhizinesi rako & riite kuti ribhururuke kumusoro !!!
Vaka yako webhusaiti & zvitoro IZVOZVI